Mozambique recovers from cyclone, fights threat of cholera - Deseret News
By Associated Press Apr 7, 2019, 3:42pm MDT
Share All sharing options for: Mozambique recovers from cyclone, fights threat of cholera
A woman and her baby walk past cholera vaccination campaign posters on the first day of the cholera vaccination programme at a camp for displaced survivors of cyclone Idai in Beira,Mozambique, Wednesday, April, 3, 2019. A cholera vaccination campaign is kicking off to reach nearly 900,000 cyclone survivors in Mozambique as officials rush to contain an outbreak of the disease. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
Women and children wait in a queue for oral cholera vaccinations, at a camp for displaced survivors of cyclone Idai in Beira, Mozambique, Wednesday, April 3, 2019. A cholera vaccination campaign is kicking off to reach nearly 900,000 cyclone survivors in Mozambique as officials rush to contain an outbreak of the disease. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
A government official receives an oral cholera vaccination at a camp for displaced survivors of cyclone Idai in Beira, Mozambique, Wednesday, April, 3, 2019. A cholera vaccination campaign is kicking off to reach nearly 900,000 cyclone survivors in Mozambique as officials rush to contain an outbreak of the disease. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
A health worker prepares to administer an oral cholera vaccination to a child at a camp for displaced survivors of cyclone Idai in Beira, Mozambique,Wednesday, April 3, 2019. A cholera vaccination campaign is kicking off to reach nearly 900,000 cyclone survivors in Mozambique as officials rush to contain an outbreak of the disease. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press
The Mayor of Beira, Daviz Simango receives an oral cholera vaccination at a camp for displaced survivors of cyclone Idai in Beira, Mozambique, Wednesday, April 3, 2019. A cholera vaccination campaign is kicking off to reach nearly 900,000 cyclone survivors in Mozambique as officials rush to contain an outbreak of the disease. Tsvangirayi Mukwazhi, Associated Press